Milina fanamarihana laser tsara indrindra faritra BL-WA30A mpanamboatra sy orinasa | Boln
Masinina fanamarihana laser amin'ny fibre BL-MFP20A / 30A
Milina fanamarihana laser fibre azo alefa BL-PMF30A
Masinina fanamarihana laser laser BL-MCO2-30W
Masinina fanamarihana laser UV BL-MUV-5W
Turbochargers Laser Manamarika sy milina fitiliana
Gear Shaft Laser Marking Machine BL-MGS-IPG100W
Masinina fanamarihana laser Gear BL-MG-IPG100W
Cylinder Liner Laser Manisy marika milina BL-MCS30A
Masinina manamarika laser amin'ny faritra BL-WA30A
Ity no milina tsara indrindra ho an'ny fanamarihana laser amin'ny lahatsoratra misy refy lehibe sy endrika maro karazana sy be pitsiny.
Ny henjana avo lenta sy ny fiantohana azo antoka amin'ny alàlan'ny firafiny vita amin'ny vy vy miharo, mihinjitra ary milina, toerana malalaka kokoa ho an'ny fivezivezena ary mora kokoa amin'ny fametrahana ireo lahatsoratra
Rafitra 1.5-axis, herin'ny herinaratra ary fehezin'ny PC, ho an'ny fanamarihana ny ampahany amin'ny endrika sy habe ary / na pallet isan-karazany;
2.Ny rafitra manisy marika sy sokitra iray manontolo dia vita amin'ny vy vita amin'ny vy, mihinjitra ary mihodina. Izany dia ahafahana mamokatra rafitra maharitra, ary manome antoka ny marimarina kokoa amin'ny fizotry ny fanamarihana laser, na dia misy fiatraikany tampoka na fiovana tsy marihin'ny marika aza;
3.Ny rafitra famaky XYZ sy ny fototra ijanonany, samy vita amin'ny vy vy, no mampiorina tsara ny faritra rehetra amin'ny marika. Saika tsy misy fihozongozona ny axis Z mandritra ny fihetsiky ny axis X, na ny slants mandritra ny fihetsiky ny axis Y;
4.Axis X (stroke 1200mm), axis Y (stroke 800mm), ahafahana mifantoka amin'ny marika marika 1200mmx500mm. Axis z (stroke 200mm) dia afaka manamarika lahatsoratra misy halavany hafa. Ankoatr'izay, ny loha laser dia azo ahitsy ho azy araka ny haavon'ny vokatra samihafa.
5.Ny rindrambaiko fanamarihana namboarina dia novolavolaina nifototra tamin'ny fitakian'ny mpanjifa ary afaka manavao maimaimpoana mandritra ny androm-piainana, miaraka amin'ny haitao tsy manam-paharoa fanandramana diso, fisorohana ny famerimberenana sy ny tsy fahitana marika, miantoka ny kalitaon'ny fanamarihana. Ary ny rindrambaiko afaka mifandraika amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa sy mandahatra ny mombamomba ny famokarana anatiny.
Hafainganana fanamarihana Max
Fanamarihana ny halalin'ny
Avereno atao ny fahamarinana
Manitsy ny elanelan'ny herinaratra
Ny lanja ankapobeny
Teo aloha: Masinina marika fanamarihana laser nomeplate BL-PFP30A
Desktop Fiber Laser Marking Machine BL-DMF20A
Masinina marika fanamarihana laser nomeplate BL-PFP30A